Xukuumadda Soomaaliya oo daah-furtay habka Mideynta Canshuurta | Somali National Television - sntv.so
Home GOBOLLADA Xukuumadda Soomaaliya oo daah-furtay habka Mideynta Canshuurta
Xukuumadda Soomaaliya oo daah-furtay habka Mideynta Canshuurta
Muqdisho (SNTV) Kulankaan wadatashiga ah ayaa ahaa mid looga hadlayey habka Mideynta Canshuuraha Dalka iyo ka doodista Canshuuraha laga qaado shaqaalaha iyo macaashka ganacsiga iyo midka gadista, waxaana ka qeyb galay wasiirada Maaliyadda Dowladda Dhexe iyo kuwa Dowlad-goboleedyada Dalka.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane C/raxmaan Ducaale Beyle oo daah furay kulanka ayaa sheegay iney wadaan dadaalo ku aadan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha soo gala dalka.
“Waxaanu maanta Kawada hadalnay arrinta canshuuraha dalka iyo mideyntooda, waxaa kale oo aan diiradda saarnay arrimaha Kharashka iyo sidii meel la iskula dhigi lahaa, maanta iyo Barri ayuu shirku socon doonaa”ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa ku amaanay wasiirada Maaliyadda Dowlad-goboleedyada dalka xiriirka wanaagsan oo ay la leeyihiin wasaaradda.
“Aadbaan runtii ugu faraxsanahay wada shaqeynta iyo xiriirka naga dhaxeeya saaxiibadey wasiirada Maaliyadda, waxaa ii muuqda in khibrad badan ay noo sii kordheyso oo mar waliba aan wax cusub isla qaadaneyno”ayuu mar kale yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka iyada oo kaashaneysa wasaaradaha Maaliyadda ee dowlad-goboleedyada.
Previous articleRugta Ganacsiga Soomaaliya oo soo dhaweysay ka mid noqoshada COMESA
Next articleCiidanka Asluubta oo daryeel u sameynayo caruurta ku dayacan Muqdisho